Photos: NLD Education Network 1 Year Anniversary | Myanmar Celebrity Gossip & News
Photos: NLD Education Network 1 Year Anniversary
Here are Photos of NLD Education Network 1 Year Anniversary which was held on 21 November 2011 at YuDaThan Venue, Pyay Road, Yangon. Myanmar Singers; Song Oo Hlaing, Ya Tha, Htoo L Linn, Mee Mee Khae, Than Thar Win and others performed withaMusic Show.
နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ယုဒသန်ရိပ်သာ မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီကွန်ယက်မှာ ပါဝင်တဲ့ ပညာရေးကွန်ယက်၏ (၁) နှစ်မြောက် အထိမ်အမှတ်ပွဲ
Nay Soe LatNovember 24, 2011 at 1:24 AMwow!! so good!!ReplyDeletetheingiNovember 24, 2011 at 6:21 AMso goodReplyDeleteCHONovember 24, 2011 at 4:54 PMအနုပညာ ဘက်ကလူတွေပါအခု့လိုမျိုးပူးပေါင်းလာတာတွေ့ရလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး နိုင်ငံအကျိုးကို ဒီ့ထက်မကထမ်းဆောင်နိုင်ကျပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ReplyDeletecutterstepNovember 24, 2011 at 6:36 PMwhatanice news!ReplyDeleteeastNovember 25, 2011 at 3:27 AMတနိူင်ငံလုံး ပူးပေါင်းညီညွှတ်ကြရင်အကောင်းဆုံးပဲ။ဒါမှ နိူင်ငံနဲ.လူမျိုး ၊ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ.ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှာReplyDeletenaywineNovember 25, 2011 at 5:43 AMvery nice newsReplyDeleteaungDecember 10, 2011 at 7:59 AMthis is dream or not?ReplyDeleteAdd commentLoad more...